Kunamata Points Kune Chishamiso uye Zvishamiso | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kune Chishamiso uye Zvishamiso
Nhasi tichabata neminamato mapoinzi echishamiso nezvishamiso. Chishamiso kutendeuka kunoshamisa kwechiitiko kana mamiriro ezvinhu ari kunze kwekunzwisisa kwemunhu. Zvishamiso zvakada kufanana nechishamiso, zvishamiso dzimwe nguva zvinogona kuunza nyonganiso mupfungwa dzevanhu nekuti kazhinji, zvinokanganisa ruzivo rwese rwemunhu. Kune mamwe mamiriro ezvinhu muhupenyu hwedu izvo zvatinoda anongova mashura uye mashura. Rugwaro runoti Mwari akazodza sei Jesu Kristu weNazareta neMweya Mutsvene uye nesimba akafamba famba achiita zvakanaka.
Mwari vachiri kuita zvishamiso, Mwari achiri mubhizimisi rekuita zvishamiso. Kristu Jesu vakanzwisisa hunhu hwemunhu. Akati pasina zviratidzo nezvishamiso vanhu havangatende. Johane 4:48 Ipapo Jesu akati kwaari, "Kana musingaoni zviratidzo nezvishamiso, hamungatongotendi." Mamwe mamiriro ezvinhu muhupenyu hwedu anodawo chishamiso nezvishamiso kuti vanhu vatende kuti zvechokwadi tiri vanhu vaMwari. Mwari anogona zvakare kureba uye kuita chero chinhu kuti vanhu vatende kuti Iye zvechokwadi ndiMwari. Mwari pavanosunungura vana veIsreal kubva muhusungwa muEjipitori, Mwari vakaita zvishamiso zvakawanda nezvishamiso kuburikidza nemaoko aMosesi.
Zvakare muhupenyu hwedu Mwari akagadzirira kuita zvishamiso zvake nezvishamiso kuitira kuti vanhu vatende kuti tinoshumira Mwari wechokwadi. Handina basa nekuti mamiriro ehupenyu hwako ndeapi, handina basa nezvinotaurwa nevanhu pamusoro pako, ndinongova nehanya nezvichaitwa naMwari muhupenyu hwako zvinoshandura maonero anoita vanhu pamusoro pako. Wakamborwara nechirwere chisingarapike here? Kana kuti uri kutambudzwa nechirwere chisingazoperi. Zvirokwazvo ndinoti kwauri, Mwari ndiye murapi mukuru uye anokwanisa kugadzirisa mamiriro ese ezvinhu. Kana iro ibasa rausina kukodzera iwe? Nyasha dzaMwari dzinotsamwirawo zvinoshamisa zvekuti iwe unowana makomborero ausingatombokodzera.
Kana zvishamiso nezvishamiso zvikaita senge zvaunoda muhupenyu hwako, ngatinamatei pamwe chete uye nekuvimba kuti Mwari vachamuka voita izvo izvo Iye oga anogona kuita.
Baba vekudenga, ndinokutendai nemaropafadzo enyu pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nechipo chehupenyu, ndinokukudzai nekuda kwenyasha dzenyu netsitsi. Rugwaro runoti ndezve tsitsi dza ishe kuti hatipedzwe. Ndinokutendai nekuti mave muridzi wangu nenhovo yangu, ndinokutendai nekuti ndimi Mwari pamusoro pehupenyu hwangu, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.Ishe, ndinonamata, ndimi Mwari wezviratidzo nezvishamiso, ndinonamata kuti mugoita hasha dzenyu dzinoshamisa muhupenyu hwangu muzita raJesu. Ishe Jesu, ndinoisa hutano hwangu mumawoko enyu. Ndinoziva mamiriro ezvinhu akashora kurapwa kwese kwandakawana kusvika parizvino, asi ndinopotera muchokwadi chekuti ndimi Mwari uye munogona kundiporesa. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu muite zvishamiso zvenyu pamusoro pehutano hwangu muzita raJesu.Ishe Jesu, ndinonamatira chishamiso chamwari pamusoro penyaya iyi yedare. Iwe ndiwe mudziviriri kana asingabatsiri ndinonamata kuti uchandiburitsa mune ino nyaya nenzira inoshamisa muzita raJesu. Tenzi, ndinonamata kuti imi mundireverere nenzira inoshamisa nemuzita raJesu. Ndinoziva kuti mikana yese yakanangana neni kubva zvino, asi ndinopotera muchokwadi chekuti ndimi Mwari wenyama yose uye hapana chinokona kuti imi muite, ndinotenda zvakasimba muchishamiso chemineti yekufa. Ndinonamata kuti utendere chishamiso chako chiitike pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Kuti wese munhu ane rurimi kwandiri anditende kuti zvechokwadi ndinoshumira Mwari mupenyu anokwanisa kununura ake. Ndinonamata kuti munondiponesa nesimba reruoko rwenyu rwerudyi nemuzita raJesu.Baba Tenzi, ndinonamatira chishamiso pamusoro pebasa rangu reroto. Izwi renyu rinoti tinofanira kukumbira uye tichagamuchira, tinofanira kutsvaga uye tichawana, tinofanira kugogodza uye musuo uzarurire isu. Ishe ndinoziva kuti handina kukodzera basa iri, asi ndinonyaradzwa nenyaya yekuti nyasha dzenyu dzakakwana. Ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzindigadzirire padhuze nehukuru muzita raJesu. Ndinonamata kuti huvepo hwako huende pamberi pangu uye nehasha zvishamiso muzita raJesu.Ishe Jesu, hapana mukadzi asingabereki muIsreal. Ndinonamata kuti uvhure chibereko changu muzita raJesu. Ishe, ndinoziva zvechokwadi kuti pakurapa ndakapfuura zera rekubereka, ndinoziva mamiriro ezvinhu akandikomberedza kubata mudiki, asi ndinotenda zvakasimba mukubudirira kwesimba renyu. Ndinotenda kuti hapana chinokona kuti iwe uite. Ndinonamata kuti muchandipindura muzita raJesu. Kungofanana newe pawakaropafadza Sara nemwana wechibvumirano, sekuvhura kwaunoita chibereko chaHana nenzira inoshamisa, ndinonamata kuti iwe uchandivhenekera ziso retsitsi pandiri uye uchandipindura muzita raJesu. Ndinonamatira chishamiso chinoita kuti hurukuro yangu ive musoro pamuromo wevanhu, ndinonamata kuti iwe umuke uite izvo izvo chete zvaunogona iwe kuita muzita raJesu.Ishe, bhuku raVaRoma 8: 26 Saizvozvo mweyawo unotibatsira mukusasimba kwedu. Nekuti hatizive chatinofanira kunyengeterera sezvatinofanira, asi Mweya pachawo unotireverera nekugomera kusingataurike. Ndinonamata kuti mweya washe undireverere. Mwari munoziva mamamiriro ese andinotarisira kwauri, munoziva nzvimbo yese yehupenyu hwangu inoda chishamiso, ndinonamata kuti muite zvishamiso zvenyu muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata, ndimi Mwari wezviratidzo nezvishamiso, ndinonamata kuti mugoita hasha dzenyu dzinoshamisa muhupenyu hwangu muzita raJesu. Ishe Jesu, ndinoisa hutano hwangu mumawoko enyu. Ndinoziva mamiriro ezvinhu akashora kurapwa kwese kwandakawana kusvika parizvino, asi ndinopotera muchokwadi chekuti ndimi Mwari uye munogona kundiporesa. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu muite zvishamiso zvenyu pamusoro pehutano hwangu muzita raJesu.Ishe Jesu, ndinonamatira chishamiso chamwari pamusoro penyaya iyi yedare. Iwe ndiwe mudziviriri kana asingabatsiri ndinonamata kuti uchandiburitsa mune ino nyaya nenzira inoshamisa muzita raJesu. Tenzi, ndinonamata kuti imi mundireverere nenzira inoshamisa nemuzita raJesu. Ndinoziva kuti mikana yese yakanangana neni kubva zvino, asi ndinopotera muchokwadi chekuti ndimi Mwari wenyama yose uye hapana chinokona kuti imi muite, ndinotenda zvakasimba muchishamiso chemineti yekufa. Ndinonamata kuti utendere chishamiso chako chiitike pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Kuti wese munhu ane rurimi kwandiri anditende kuti zvechokwadi ndinoshumira Mwari mupenyu anokwanisa kununura ake. Ndinonamata kuti munondiponesa nesimba reruoko rwenyu rwerudyi nemuzita raJesu.Baba Tenzi, ndinonamatira chishamiso pamusoro pebasa rangu reroto. Izwi renyu rinoti tinofanira kukumbira uye tichagamuchira, tinofanira kutsvaga uye tichawana, tinofanira kugogodza uye musuo uzarurire isu. Ishe ndinoziva kuti handina kukodzera basa iri, asi ndinonyaradzwa nenyaya yekuti nyasha dzenyu dzakakwana. Ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzindigadzirire padhuze nehukuru muzita raJesu. Ndinonamata kuti huvepo hwako huende pamberi pangu uye nehasha zvishamiso muzita raJesu.Ishe Jesu, hapana mukadzi asingabereki muIsreal. Ndinonamata kuti uvhure chibereko changu muzita raJesu. Ishe, ndinoziva zvechokwadi kuti pakurapa ndakapfuura zera rekubereka, ndinoziva mamiriro ezvinhu akandikomberedza kubata mudiki, asi ndinotenda zvakasimba mukubudirira kwesimba renyu. Ndinotenda kuti hapana chinokona kuti iwe uite. Ndinonamata kuti muchandipindura muzita raJesu. Kungofanana newe pawakaropafadza Sara nemwana wechibvumirano, sekuvhura kwaunoita chibereko chaHana nenzira inoshamisa, ndinonamata kuti iwe uchandivhenekera ziso retsitsi pandiri uye uchandipindura muzita raJesu. Ndinonamatira chishamiso chinoita kuti hurukuro yangu ive musoro pamuromo wevanhu, ndinonamata kuti iwe umuke uite izvo izvo chete zvaunogona iwe kuita muzita raJesu.Ishe, bhuku raVaRoma 8: 26 Saizvozvo mweyawo unotibatsira mukusasimba kwedu. Nekuti hatizive chatinofanira kunyengeterera sezvatinofanira, asi Mweya pachawo unotireverera nekugomera kusingataurike. Ndinonamata kuti mweya washe undireverere. Mwari munoziva mamamiriro ese andinotarisira kwauri, munoziva nzvimbo yese yehupenyu hwangu inoda chishamiso, ndinonamata kuti muite zvishamiso zvenyu muzita raJesu.
Previous nyaya5 Zviratidzo Kuti Uzive Iwe Une Kudanwa kwaMwari
inoteveraMinamato Yemunamato Kupokana Kusamira
Angela, Christian naCaleb, mhuri Chikunguru 10, 2021 At 11:03 am
Bata uye bvumirana neni kununura kupora uye kudzoreredza mukati mangu uye hutano hwemhuri yangu, kufunga, muviri uye mweya. Ndinoraira kuzara munzvimbo dzese muhupenyu hwedu kuti tirarame izvozvi neropa raJesu, Ishe putsai chituko uye rega ropa rako ritaure pachangu Muzita raJesu ameni
3 Kwemazuva Kutsanya uye Munyengetero uchirwisa Yakatangwa Strongman
Makumi makumi matatu eminamato yematanho Anotevera